Ego 10 kacha mma kacha mma site na Market Capitalization June 2021 | DeFi ego Ego 10 kacha mma kacha mma - Deficoins.io
Wee wepụ Bitcoin Review
Onye kere Nyocha
Nyocha ego ego
Ntughari Ntinye Anya
Ntughari DAO Token Nyocha
Zụta Token Anyị
Top 10 Best DeFi ego
Achọpụtala ego nke ọma (DeFi) enwetawo mmasị dị elu site na ndị na-anụ ọkụ n'obi na-adịbeghị anya - na-adọta ndị na-etinye ego si n'akụkụ ụwa niile. Na ụdị ya kachasị dị mfe, DeFi bụ okwu ejiri maka ngwa ego eji eme ya na teknụzụ blockchain - nke a na-achọ ime ka ọnọdụ akụ na ụba bụrụ nke onye kwuo uche ya site na dochie ụlọ ọrụ etiti.
Taa, nyiwe nke DeFi nwere ike inye gi ụdị ọrụ ego zuru oke - site na azụmaahịa, ịgbazinye ego, ịgbazinye ego, mgbanwe mgbanwe na njikwa, njikwa ngwa ahịa na ndị ọzọ.
Ihe ndozi nke kacha ewu ewu na DeFi emeputala ihe eji mara ha, dika uzo iji kwado oru ha dika igba ndi oru ume. Y’oburu n’inwe mmasi inweta otu ahia ohuru n’oge - itinye ego na ego DeFi bu uzo kacha mma.
N'ebe a na DefiCoins.io - anyị na-eleba anya na ụfọdụ mkpụrụ ego DeFi kacha mma na ahịa ma mụọ ọrụ ha n'ime usoro okike DeFi ha. Anyị na-akọwakwa usoro nke otu ị ga-esi azụta mkpụrụ ego DeFi site na nkasi obi nke ụlọ gị na-enweghị akwụ ụgwọ pasent na ụgwọ ụgwọ ma ọ bụ ọrụ.
Zụrụ ego DeFi na Top Broker anyị
10 Best DeFi ego 2021
N'ihi nnukwu ewu ewu na ntoputa nke nyiwe ohuru DeFi - ndepụta nke mkpụrụ ego DeFi na-eto mgbe niile. N'oge ederede - mkpokọta ahịa ahịa nke ụlọ ọrụ DeFi niile na-akwụ ihe karịrị ijeri $ 115. Nke a buru oke ibu, ọkachasị mgbe ị tụlere etu obere ihe DeFi si bụrụ nwata.
Nke a bụ ndepụta nke mkpụrụ ego kacha mma nke 10 kacha mma nke nyere aka na ịrị elu ahịa a.
1. Igbanye (UNI)
Uniswap bu uzo mgbanwe di nma nke na acho ahia DeFi ugbu a. Ọ na-eji sistemụ Onye Mepere Ahịa akpaaka (AMM) iji hụ na enwere oke mmiri zuru ezu maka akara ngosi ERC20 na saịtị ya. Usoro nkwekọrịta Uniswap adọtala ndị na-eguzosi ike n'ihe na-esote dị ka ihe ngwọta crypto-asset. Ọ na - enye gị ohere ịchịkwa igodo nzuzo gị, jikọta ya na obere akpa ndị ọzọ, ma nye gị ohere ịzụ ahịa na ụgwọ dị ala.
Ulo oru UNI bidoro site na usoro Uniswap na Septemba 2020 - dị ka ụzọ iji kwụghachi ndị ọrụ ya ụgwọ. Mkpụrụ ego DeFi banyere n'ahịa na ọnụahịa ahịa nke $ 2.94. N'ime ọnwa ole na ole - ọnụ ahịa mkpụrụ ego ahụ arịgoro ruo $ 35.80. Enwere ike ikwu na mkpụrụ ego DeFi bụ otu n'ime akara ngosi kachasị mma na ụlọ ọrụ ahụ - ya na ịrị elu karịa 1,100% n'ihe gbasara naanị ọnwa asatọ.
Ọ bụkwa otu n'ime mkpụrụ ego DeFi kacha mma na ntinye ọnụahịa, nke nwere okpu ahịa karịrị $ 18 ijeri. Mgbe ịzụrụ UNI, ị ga-enwetakwa ihe mkpali na mwepu na usoro Uniswap. Dịka ọmụmaatụ, ọ dabere na oke nke UNI njide - ị ga-enwe ike ịme ntuli aka na atumatu dị iche iche akwadoro maka gburugburu ụwa nke Uniswap.
Usoro nkwekọrịta Uniswap ewepụtala atụmatụ afọ anọ maka oke ya nke akara UNI. Site na ngụkọta nke ego 1 ijeri, 60% debeere ndị otu obodo Uniswap. Ego DeFi adịworị maka ịzụ ahịa na nyiwe cryptocurrency dị ka Capital.com.
Zụrụ Uniswap Ugbu a
2. Chainlink (njikọ)
O doro anya na Chainlink bụ netwọk ikuku na-ejikarị arụ ọrụ dị ugbu a na ahịa DeFi. Ọ na-azụ data nke ụwa ka ọ bụrụ ezigbo nkwekọrịta na ngọngọ - na-eje ozi dị ka njikọ dị n'etiti ozi a na-enwetụbeghị ụdị ya na-aga n'ihu ma na-aga n'ihu n'etiti crypto DApps. Onye na-enye ọrụ ahụ ewepụtala akara aka ya nke LINK, nke nwere ọtụtụ ọrụ ọrụ n'elu ikpo okwu.
Site na mmụba na-arịwanye elu nke nyiwe na-enweghị atụ, Chainlink enwewo nnukwu uto kemgbe mmalite ya na 2019. Ọ gbanwere ruo n'ókè nke na ọ nwere ike ịkwado atụmatụ ndị ọzọ crypto nwere ike ịba uru na gburugburu ebe obibi Chainlink.
N'ihe banyere isi ahia, LINK bụ otu n'ime mkpụrụ ego DeFi a na-ewu ewu n'oge a - na ọnụahịa ya karịrị ijeri $ 14. Mkpụrụ ego DeFi banyere 2021 na ọnụahịa nke $ 12.15. N'oge edere, na Eprel 2021 - uru nke njikọ B since ebe ọ bụ na ọ meriri oge niile na $ 44.36. Ọtụtụ na-atụ anya na nsogbu a na-aga n'ihu na-aga n'ihu na oge.
Kemgbe ọtụtụ afọ, Chainlink egosila na ọ bụ otu n'ime usoro nyocha kachasị mma nke DeFi iji jigide mkpa ya na ụlọ ọrụ ahụ. Ka ọ na - ele anya ịgbasa arụmọrụ nke ikpo okwu DeFi, njikọ ga - enwe ike ịnye ndị nrụpụta DeFi ndị ọzọ ohere mgbanwe. N'ịtụle akụkụ ndị a, akara akara LINK bụ n'ụzọ doro anya otu n'ime mkpụrụ ego DeFi kacha mma ịtụle na 2021.
Zụta Chainlink Ugbu a
Maka ndị na-amaghị, ahịa ego ọzọ nke cryptocurrencies na mkpụrụ ego DeFi bụ nke ama ama. Maka ndị na-achọ izere mgbanwe mgbanwe ọnụahịa, mkpụrụ ego DAI nwere ike ịmasị. Na nkenke, a na-ewu mkpụrụ ego DeFi crypto a na Ethereum blockcheni ma nwee ọnụ ahịa ya na nke dollar US.
N'ezie, DAI bụ nke mbụ etinyere, nkwado akụ nke ụdị ya. Mkpụrụ ego DeFi a mepụtara site na sọftụwarụ mepere emepe MakerDAO Protocol - nke bụ otu n'ime nyiwe kachasị mma nke DeFi iji nkwekọrịta dị mma iji wulite ngwa dị iche iche.
Ugbu a, DAI nwere nnukwu ahịa nke $ 4 - na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime mkpụrụ ego DeFi kacha mma na-agbasa. O nwere ọnụego mgbanwe nke gosipụtara uru nke dollar US na nke nke ego ọzọ. Dị ka ị nwere ike iche n'echiche, uru dị ukwuu nke ijide DAI bụ ịkwụsịlata ihe egwu gị nke ikpughe na oke nsogbu nke ahịa cryptocurrency zuru ezu.
Na mgbakwunye, iji DAI kama ego ego nwere ike inyere gị aka belata ọnụahịa azụmahịa na igbu oge metụtara mgbe ị na-azụ ahịa n'ahịa ahịa. N'ikpeazụ, DAI bụ mkpụrụ ego DeFi kachasị mma nke ụdị ya - yabụ anyị na-atụ anya nnukwu ihe maka ọrụ ahụ na-abanye n'ime afọ ndị na-abịa.
Zụta DAI Ugbu a
0x bụ usoro DeFi nke na-enye ndị mmepe ohere iwulite mgbanwe nke onwe ha nke ọma. Ọ na-ejekwa ozi dị ka azịza DEX na-enweghị nlekọta na-enye ndị ọrụ ohere ịzụ ahịa akara ERC20 n'ụzọ dị mfe. Agbanyeghị, ọdịiche pụtara ìhè bụ na yana nkwado ya maka akara aka ERC20, mgbanwe 0x na-emekwa ka akụ ERC-721 crypto rụọ ọrụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nke a na-enye ohere maka azụmaahịa na-enweghị ikike nke ọtụtụ mkpụrụ ego dijitalụ.
Na 2017, usoro 0x mepere emepe webatara mkpụrụ ego 0x (ZRX). Dị ka ọtụtụ mkpụrụ ego DeFi ndị ọzọ dị elu, mkpụrụ ego ZRX na-agbakwa ọsọ na Ethereum blockchain na ebumnuche mbụ iji nyere aka ịchịkwa usoro okike ya. Agbanyeghị, na 2019 - ekenyela mkpụrụ ego 0x ọrụ ndị ọzọ, dị ka ike ijikọ ndị ọrụ mmiri.
0x emeela nke ọma kemgbe mmalite nke 2021. N'ezie, mkpụrụ ego DeFi amụbaala ugbu a na uru karịa 500% - na-eru elu oge niile nke $ 2.33 na Eprel 2021. Ihe akaebe ugbu a na-enwe isi ahịa nke ihe karịrị ijeri $ 1.2 . Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịnweta usoro 0x ahụ, ịnwere ike ịzụ ahịa akara DeFi a site na nyiwe azụmaahịa a na - ejikọtaghị ọnụ - dịka onye na - ere ahịa ego Capital.com.
Zụta 0x Ugbu a
5. Onye kere (MKR)
Onye kere (MKR) bụ mkpụrụ ego DeFi ọzọ nke ndị otu mepụtara na MakerDAO protocol. Ọ bụ ezie na DAI bu n'obi iweta nkwụsi ike, ebumnuche nke mkpụrụ ego Onye kere bụ ka ọ bụrụ akara ngosi bara uru. N'ezie, a na-eji akara aka MKR DeFi mee ka ọnụ ahịa DAI bụrụ $ 1. Iji mezuo nke a, enwere ike ịmepụta ma mebie mkpụrụ ego nke Onye mebere iji wee gbanwee ọnụego mgbanwe dị na ahịa.
Ndị jidere nke MKR ga-aza ajụjụ maka ịhazigharị ụkpụrụ nduzi banyere DAI stablecoin. Ọ bụrụ na ị ga-etinye ego na Onye kere gị, ị ga-enweta ikike ịtụ vootu n'ime usoro okike MakerDAO.
Ọzọkwa, ị ga - enwekwa ike ịnata nkwanye ugwu maka isonye na ọchịchị nke usoro MakerDAO, dị ka ụgwọ agbada na ọmụrụ nwa dị mma. Site na okpu ahia nke ihe karịrị $ 3 ijeri, Onye kere bụ otu n’ime mkpụrụ ego 10 DeFi kacha elu na ahịa crypto. Ọ bụrụ na DAI ga-eme nke ọma n'ọgba ahịa azụmaahịa cryptocurrency, nke a nwekwara ike ịtụgharị uche na ego nke Maker DeFi mkpụrụ ego.
Zụrụ Onye kere Ugbu a
6. Onyinye (COMP)
Compound bụ ụzọ ọzọ na - eduga ịgbazinye ego na ịgbazinye ego na - enyere ndị ọrụ aka ịnakwere mmasị na akụ crypto. Ikpo okwu a haziri ọtụtụ ọdọ mmiri mejupụtara maka nzube a. Ozugbo ị tinyere akụ gị n'ime otu n'ime ọdọ mmiri dị otú ahụ, ị ​​ga-enwe ike iwepụta cTokens na nloghachi.
Mgbe ịchọrọ inweta akụ gị, ịnwere ike ịgbapụta cTokens ndị a. N'ụzọ dị mkpa, ebe ọ bụ na ọnụego mgbanwe nke cTokens na-abawanye n'oge, ị ga-enwekwa ike ịnweta mmasị na itinye ego gị. Na June 2020, Compound malitere akara aka ya - COMP. Ndị jidere akara ngosi DeFi a nwere ike ịnweta ikike ịtụ vootu na usoro Compound.
Ikpo okwu a na-enweta ọtụtụ traction na ahịa, na mkpụrụ ego DeFi na nso nso a gafere nnukwu ahịa ahịa nke ihe karịrị ijeri $ 3. Onyinye batara na 2021 na ego nke $ 143.90. Kemgbe ahụ, mkpụrụ ego Defi karịrị $ 638. Nke a pụtara na n'ime ọnwa anọ ịzụ ahịa - Compound abawanyela uru karịa 350%.
Zụrụ onyinye ugbu a
7. Uwa (AAVE)
Aave bụ ikpo okwu na-emeghe emeghe nke na-arụ ọrụ dị ka ọrụ ịgbazinye ego crypto. Usoro nkwekọrịta mmiri na-enweghị oke na-enye gị ohere ịnweta ọmịiko yana ịgbazinye ego na akụ crypto. Ebuputara ikpo okwu DeFi a na ahia ahia ahia na 2017.
Agbanyeghị, n'oge ahụ - akpọrọ ikpo okwu a ETHLend, yana LEND dị ka akara aka ya. Ọ bụ isi rụrụ ọrụ dị ka sistemụ egwuregwu iji jikọta ndị na-agbazinye ego na ndị na-agbaziri ego. Na 2018, a gbanwere usoro DeFi Aave - na-agbakwunye na ọrụ ịgbazinye ego ọhụrụ.
Taa, mkpụrụ ego AAVE nwere ike ịmị mkpụrụ site na usoro iji nye aka na nchekwa na arụmọrụ ya. Ọzọkwa, ị nwekwara ike ịnụ ụtọ ịkwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ na ụgwọ akwụghị ụgwọ n'elu igwe Aave. Mkpụrụ ego DeFi nwere ọtụtụ ebe ọ na-ere - ebe ọ nwere ezigbo ngwa ụwa na ahịa ịgbazinye ego crypto na-arịwanye elu.
Ọ bụkwa otu n'ime mkpụrụ ego DeFi dị elu karịa ọnụ ahịa, yana isi ahịa ahịa karịrị ijeri $ 5. Ego AAVE DeFi na-ekpori ndụ n'ahịa buru ibu kemgbe mmalite nke 2021 - na-ebili na ihe karịrị 350% na ihe gbasara ọnwa anọ.
Zụrụ Aave Ugbu a
8. Synthetix (SNX) Na-agagharị
Synthetix bụ otu n'ime ụlọ ọrụ DeFi na-eto ngwa ngwa n'ahịa taa. Ọ bụ n'azụ mgbanwe nke ọma na-enye ohere ka ndị ọrụ gbanwee tokens n'elu ikpo okwu. Agbanyeghị, ihe mere Synthetix pụrụ iche bụ na ọ na-enye ndị ọrụ ohere iberibe ngwongwo sịntetị nke ha - akpọ 'Synths.' N'okwu dị mfe, Synths bụ akụrụngwa ego nke na-agbaso uru nke uru bara uru.
Nwere ike ịzụ ahịa Synths maka cryptocurrencies, indices, na akụ ndị ọzọ dị adị dị ka ọla edo na mgbanwe nke Synthetix. Agbanyeghị, ịkwesịrị ịnwe SNX - akara aka nke Synthetix iji nye nkwado maka Synths. Zọ a, mgbe ọ bụla ahia gị Synths, a ga-ekpochi ihe ngosi SNX gị na nkwekọrịta nkwekọrịta.
Tụkwasị na nke a, akara aka SNX na-ekesara ndị nwe ya otu akụkụ nke ego anakọtara, na-enye gị ohere ị nweta ego na-abaghị uru. N'ịtụle uru a bara uru n'ime ikpo okwu, ọchịchọ maka akara ngosi SNX nwere ike ịga n'ihu na-ebili. Ihe ngosi a apụtaworị dịka otu n'ime mkpụrụ ego DeFi kacha mma, yana isi ahịa nke ihe karịrị ijeri $ 2. N'ime ọnwa anọ gara aga, ọnụahịa nke mkpụrụ ego SNX arịalarịrị karịa 120% na uru.
Zụta Synthetix Ugbu a
9. Agụgọ.nke (YFI)
Amalitere Yearn.finance na mbido 2020, ebum n’uche ịnye mkpụrụ dị elu maka Ethereum, stablecoins na altcoyin ndị ọzọ. Usoro a na - enyere nke a aka site na njirimara akpọrọ 'Vaults,' nke na - enyere aka belata oke ọnụ ahịa azụmaahịa Ethereum.
Yearn.finance na-ele anya ime ka echiche nke DeFi dị mfe maka ndị na-etinye ego ọhụrụ, na-enye ha ohere ị weghachi nloghachi site na ntinye aka pere mpe. Uzo a DeFi enwetawo nlebara anya ozo site na ahia ya na nbido akara aka YFI ya. Onu ego DeFi nwere oke ahia ahia kariri $ 1.5.
Agbanyeghị, enwere ego pere mpe naanị mkpụrụ ego 36,666 - nke na-agbakwunye na uru ọrụ Defi. N'oge edere, ego YFI dị ọnụ ala karịa $ 42,564 - otu n'ime ndị kachasị elu n'ahịa. Nke a bụ nnukwu ọnụ ọgụgụ, na-atụle na e webatara mkpụrụ ego naanị na July 2020 - na ọnụahịa nke $ 1,050.
Zụta Yearn.finance Ugbu a
10. PancakeSwap (achicha)
PancakeSwap bụ mgbanwe agbanwere nke na-enye gị ohere igbanwe akara BEP20 na Binance Smart Chain, ụzọ dị mma ma dị ọnụ ala na Ethereum. Yiri Uniswap, DEX a na-ejikwa sistemụ Onye Na-ere Ahịa akpaaka na-emepụta ọdọ mmiri mmiri. PancakeSwap weputara akara aka ya nke CAKE na Septemba 2020. Ndị ọrụ nwere ike ịdọrọ CAKE na otu n'ime ọtụtụ ọdọ mmiri ndị enyere maka iji nweta akara ngosi karịa.
Ego nke obere ebubo ebe ọ bụ na dọtara ọtụtụ ndị na-anụ DeFi na ikpo okwu a. - na - eme ka mkpụrụ ego na - akwụgo elu. Akara CAKE gosipụtara ngosipụta ọnụahịa dị ịrịba ama na nkeji iri abụọ na mbụ nke 2021. Mkpụrụ ego Defi malitere afọ na $ 0.63 na, na Eprel 26, 2021 - kụrụ elu oge niile nke $ 33.83.
Nke a sụgharịrị ịbụ uru nke karịrị 5,000% naanị n'ime ọnwa anọ. N'oge a na-ede akwụkwọ, akara ngosi CAKE eguzobewokwa ahịa ahịa nke ihe karịrị ijeri $ 5, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ihe ngosi kacha mma DeFi crypto nke afọ.
Dị Mkpa Ịmata
Ọ baghị uru ikwu, ịrị elu na-ewu ewu nke mkpụrụ ego DeFi na-egosi na ngalaba DeFi buru ibu na-aga iru ahịa ahịa sara mbara. Usoro ogbugba ndu ndi edeputara ebe a na-egosiputa na enwere ezigbo ochicho, na ulo di n'uwa ahia ahia di iche iche na oru ha.
Nke ahụ kwuru, enwere ọtụtụ ọnọdụ na-atụnye aka na ịga nke a. Dịka ọmụmaatụ, akara ngosi DeFi bụ naanị otu akụkụ nke usoro okike DeFi nke sara mbara. N'ezie, a na-emepe ihe ndị a dị ka ụzọ iji kwado usoro mgbasa ozi na-enweghị isi - nke na-enye ọtụtụ ohere ndị ọzọ iji nyere gị aka ị nweta ihe DeFi.
N'iburu nke ahụ n'uche, ka anyị nyochaa ụfọdụ nyiwe kachasị mma nke DeFi na-achịkwa ahịa taa.
Zụta PancakeSwap Ugbu a
Nhazi kacha mma nke 2021
Ebumnuche bụ isi nke nyiwe DeFi bụ ime ka usoro itinye ego na azụmahịa bawanye uru. Otu n'ime ebe nkiri dị n'etiti ebe a bụ na ngwọta ndị a na-enye nghọta ka elu ma e jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ ego ọdịnala.
Ihe ntanetị kacha mma nke DeFi nke oge a na-akwado site na dApps ma ọ bụ usoro mgbasa ozi - nke e wuru na Bitcoin ma ọ bụ Ethereum. E nwere ọrụ ọhụrụ na-abanye n'ahịa ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ọnwa, na-enye ohere ego ọhụrụ maka ndị na-etinye ego na ndị ahịa nke ụdị na nha niile.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ụzọ eji eji dApps na usoro iwu akwadoro taa:
Gbaziri na ịgbazinye ego: Ngwaọrụ DeFi na-enye gị ohere ịbinye ego na akụ crypto gị, na-enweghị ị mezue usoro KYC, lelee kredit gị, ma ọ bụ ọbụlagodi ịnweta akaụntụ akụ. I nwekwara ike ibinye ihe njigide gị cryptocurrency na nkwụghachi maka ọmụrụ nwa, na-enye aka na ọnụọgụ nke ikpo okwu DeFi na ajụjụ.
Dijitalụ Wallets: Ego a na - eleghi anya nke DeFi na - enye gi ikike ichota ihe omuma gi na igodo nzuzo gi na gburugburu ya.
Mgbanwe Agbanwe: Platformslọ ọrụ kachasị mma nke DeFi na-enyere gị aka iwepụ mkpa nke onye etiti na kama itinye aka na azụmaahịa site na nkwekọrịta amamịghe.
Protocol Protocol: DeFi na-akwado usoro nke na-enye ndị ọrụ ohere itinye ego maka ngwaahịa itinye ego dịka itinye ego na akpaka na ndị na-achịkọta akụ.
Ego na-abụghị nke ịbinye ego: DeFi emeela ka ọ dịrị gị mfe ịnata mgbazinye ego na-enweghị nchebe na ntọala ndị ọgbọ.
Na-abụghị Fungible Tokens: Ngwongwo kachasị mma nke DeFi na-arịwanye elu na-enye nkwado maka NFTs. Ndị a bụ akara ngosi nke na-enye gị ohere ịmekọrịta akụ na-abụghị nke commodifiable na blockchain. Nke a nwere ike ịgụnye ihe osise mbụ, abụ, ma ọ bụ ọbụna Tweet!
Mmụba Ugbo: Ngwaahịa DeFi a na - enyere gị aka inweta mmasị na akụ crypto gị site na ịchebe ha n'elu ikpo okwu DeFi.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ohere ụlọ ọrụ DeFi dị nnọọ iche. Y0u nwere ike nweta nke oma, enweghi oke ohere inweta ihe enyemaka ego obula n’echiche - site na ego ego, nbinye ego, ahia, mkpuchi, na ndi ozo.
Ya mere, olee ebe ị ga - achọta nyiwe kachasị mma nke DeFi nke ga - enye gị ohere ịnweta atụmatụ kachasị mma nke ngalaba a? N'okpuru ebe a, anyị enyochala nhọrọ nke nyiwe kachasị elu na otu ị ga-esi rite uru na ha.
Amalitere na 2018, YouHodler bụ otu n'ime usoro ịgbazinye ego kacha mma kachasị mma na ahịa. Ọ bụ isi ọrụ ọrụ ego crypto-fiat nke na-enye gị nkwụghachi dị elu na nkwụnye ego gị. Ulo oru DeFi emekorita ya na ulo oru ndi a ma ama na Europe na Switzerland iji mee ka nchekwa nke ihe dijitalụ gi di nchebe.
YouHodler jikọtara ya na mgbanwe azụmaahịa nke na-enye nkwado maka ọtụtụ mkpụrụ ego DeFi a ma ama - gụnyere Compound, DAI, Uniswap, Chainlink, Maker, na ndị ọzọ. Otu n'ime ihe ndị pụtara ìhè nke YouHodler bụ na ọ na - enye gị ohere itinye Bitcoin, ma ọ bụ mkpuchi ndị ọzọ - iji bido ịmalite inwe mmasị na akụ ahụ ozugbo.
Nkwekọrịta na ịgbazinye ego ọ bụla n'elu ikpo okwu a bụ akwụkwọ iwu kwadoro nke na-agbaso ụkpụrụ nduzi nke European Union. Nwere ike irite ihe ruru 12.7% na nkwụnye ego crypto gị na nloghachi ọ bụla ị mere, a ga-etinye ya ozugbo na obere akpa gị YouHodler kwa izu. Ewezuga nke a, ịnwekwara ike ịnweta mgbazinye ego crypto n'elu ikpo okwu. YouHodler na-enye oke nbinye ego mgbazinye ego nke 90% maka 20 kacha elu cryptocurrencies kwadoro.
Nwekwara ike ịnweta mgbazinye ego na ego ego dị ka dollar US, euro, Switzerland franc, na pound Britain. Enwere ike wezuga ego mgbazinye na aka na ụlọ akụ gị ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ. Maka ndị nwere ahụmịhe karịa ahịa DeFi crypto, YouHodler gosipụtarala ngwaahịa abụọ ọzọ - MultiHODL na Turbocharge. Site na njirimara ndị a, ikpo okwu a ga - etinye ego gị n’ime ọtụtụ mgbazinye ego iji wee nwetaghachi gị.
Agbanyeghị, na-atụle ihe egwu dị na ya, arụ ọrụ ndị a ka echebere nke ọma maka ndị ọchụnta ego nwere oge maara ihe na ahịa ahịa ego. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-achọ naanị ị nweta ego na-akwụ ụgwọ site na akụ crypto gị, mgbe ahụ YouHodler nwere ike ị nweta nnukwu nloghachi na-enye gị ohere ịchekwa akụ gị na ebe nchekwa.
Nexo bụ aha ọzọ a ma ama na oghere crypto. Ikpo okwu ewebatala ọtụtụ ngwaahịa ego nwere ike dochie akụ akụ ọdịnala na akụ crypto. Nexo na-enye gị ohere ị nweta mmasị na 18 dị iche iche akụ crypto - gụnyere mkpụrụ ego DeFi dịka DAI na Nexo token. Nwere ike nweta ihe ruru 8% nloghachi na cryptocurrencies, wee rue 12% na stablecoins.
A ga-akwụ gị ụgwọ ọrụ gị kwa ụbọchị. Tụkwasị na nke a, ị nwekwara ike itinye ego ego dị ka euro, US dollar, na pound Britain iji weghachi na ha. E wezụga akaụntụ nchekwa ego crypto, Nexo na-enyekwa gị ohere ịnata mgbazinye ego ozugbo site na ịkọkọta akụ gị dijitalụ.
Usoro a na - akpaghị aka - ị nwere ike ị nweta akwụkwọ arịrịọ mgbazinye gị na-enweghị ịgafe nyocha ọ bụla. Ọnụ ego ọmụrụ nwa maka ego mgbazinye ego Nexo crypto bidoro na 5.90% APR. Ejiri ego mbinye ego pere mpe na $ 50, ma ị nwere ike ịnweta akara kredit ruo $ 2 nde. Nexo eguzobewokwa mgbanwe nke ya, ebe ị nwere ike ịzụta ma ree ihe karịrị otu narị abụọ cryptocurrency.
Ikpo okwu echepụtala Smart Nexo iji hụ na ị nwetara ọnụahịa kachasị mma n'ahịa site na ijikọ mgbanwe dị iche iche. Ọzọkwa, Nexo na-ekwekwa nkwa na a ga-enwe ntakịrị ntakịrị mgbanwe mgbanwe mgbe ị na-etinye usoro ahịa. Yiri usoro nyiwe ndị ọzọ nke DeFi, Nexo amalitekwala ego nke ọchịchị ya - akara aka NEXO.
Ijide akara aka NEXO na-enye gị ọtụtụ ụgwọ ọrụ n'elu ikpo okwu - dịka nloghachi dị elu na nkwụnye ego gị, yana obere ọmụrụ nwa na mgbazinye ego. Karịsịa, Nexo bụ otu n'ime nyiwe ole na ole na-akwụ ndị na-ere ya akara aka. N'ezie, 30% nke net uru nke mkpụrụ ego DeFi a na-ekesa n'etiti ndị ji akaebe NEXO - dabere na nha na ogologo oge nke ego ahụ.
Uniswap bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha otu n'ime nyiwe DeFi kachasị ewu ewu na ahịa cryptocurrency zuru oke. Ikpo okwu na-enye gị ohere ịzụ ahịa akara ERC-20 ọ bụla dabere na Ethereum site na iji obere akpa dị ka Metamask. Na 2020, Uniswap kwadoro ijeri dollar 58 nke ọnụahịa azụmaahịa - na-eme ka ọ bụrụ mgbanwe kachasị ukwuu na ụwa crypto. Onu ogugu ndi a sitere na 15,000% site na 2019 - na-egosi ka iru uzo DeFi si bia ihe kariri otu afo.
Otu uru dị na Uniswap bụ na ọ dịghị mkpa ka ị tinye akụ gị n'ime ikpo okwu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nke a bụ ihe na-abụghị nke nlekọta na-eji ọdọ mmiri mmiri kama iji akwụkwọ akwụkwọ. Ọ dịghị mkpa ka ị debanye aha na nkwekọrịta Uniswap ma ọ bụ mezue usoro KYC.
Nwere ike ịgbanwe n'etiti akara aka ERC20 ọ bụla ma ọ bụ nweta obere pasent nke ụgwọ anakọtara naanị site na ịgbakwunye na ọdọ mmiri. Dịka anyị kwuburu na mbido, Uniswap nwekwara akara aka ya nke UNI - nke nwere ike inye gị ohere ntuli aka na usoro nchịkwa nke onye na-eweta ọrụ. Mkpụrụ ego DeFi adịbeghị nso rịrị elu na ọnụahịa, na-adọtakwu uche na usoro UNI.
Na nso nso a, Uniswap weputara uzo ohuru nke mgbanwe ya - aha ya bu Uniswap V3. Ọ na-abịa site na itinye ego na ụgwọ ego. Nke a na-enye ndị na-enye ego mmiri mmiri ikike ịkwụghachi ha dịka ọkwa ha siri dị. Atụmatụ ndị a na-eme ka Uniswap V3 bụrụ otu n'ime AMM ndị na-agbanwe agbanwe.
Usoro Uniswap na-ezubekwa ịnye mgbatị azụmahịa nke nwere ike ịkarị nke mgbanwe mgbanwe. Mmelite ndị ọhụrụ a nwere ike ibugharị ọnụahịa nke akara UNI DeFi n'ihu. Dịka ị pụrụ ịhụ, ikpo okwu DeFi na-agbanwe agbanwe oge na-adịghị anya, ọ nwere ike tinye ngwaahịa ndị ọzọ dị ka mgbazinye ego crypto na ịgbazinye ego na gburugburu ya.
Amalitere na 2018, BlockFi ghọrọ usoro ịga-aga iji bulie akụ dijitalụ gị. Kemgbe ọtụtụ afọ, usoro DeFi jisiri ike nweta ihe karịrị $ 150 nde site na ọnụ ọgụgụ obodo a ma ama, ma nweta onye ahịa na-eguzosi ike n'ihe na-eso. BlockFi na-enye ego di iche-iche nke ego elebara anya nye ma ndi n’ere ahia ma ndi oru. Akaụntụ BlockFiwunyere Mmasị, BIAS na nkenke - na-enye gị ohere ị nweta ọnụego ọmụrụ nwa ruo 8.6% kwa afọ na cryptocurrencies.
Dị ka ọ dị na nyiwe ndị ọzọ nke DeFi. BlockFi na-agbazinye ndị ọrụ a ego na ndị ọzọ na ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ ma na-ebo ha ọmụrụ nwa - nke ahụ, n'aka nke ya, na-akwụ ndị ọrụ ya ụgwọ. Nke ahụ kwuru, ọ dị mkpa iburu n'uche na a na-enye ndị na-edebe ego ọrụ ihe kacha mkpa ma e jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ nha nha mgbe ọ na-abịa ịgbazinye ego.
BlockFi na-enyekwa ndị ọrụ ohere iji akụ dijitalụ ha dị ka ihe nkwekọrịta, ma gbazinye 50% nke uru ọnụọgụ na dollar US. Dịka ị pụrụ ịhụ, nke a pere mpe karịa LTV nke nyiwe ndị ọzọ dịka YouHodler nyere. N'aka nke ọzọ, a na-arụ ọrụ mgbazinye ego n'otu ntabi anya. N'ikpeazụ, uru ọzọ nke BlockFi bụ na ọ na-enye n'efu maka mgbanwe na ikpo okwu ya.
Agbanyeghị, ọnụego mgbanwe ahụ adịchaghị mma ma e jiri ya tụnyere ihe ịnwere ike ịnata na nyiwe ndị ọzọ. Na mkpokọta, BlockFi na-ejide ọnọdụ ya dịka otu n'ime ọrụ ọrụ ego ọzọ - na-enyere gị aka iji akụ dijitalụ gị na-akpata ego na-akwụ ụgwọ, yana ịgbanye mgbazinye ngwa ngwa megide ya.
Ebuputara ya dị ka ETHLend, Aave malitere dị ka ahịa ebe ndị na-agbazinye ego na ndị na-agbazinye ego nwere ike ịmekọrịta okwu ha na-enweghị ịgafe ndị ọzọ. Kemgbe ahụ, usoro DeFi etolitela na usoro DeFi siri ike nke na-enye ọtụtụ ngwaahịa ego. Mmiri ọdọ mmiri nke Aave na-enye nkwado maka mkpụrụ ego 25 crypto, anụ ụlọ, na DeFi ugbu a.
Nke a gụnyere DAI, Chainlink, yearn.finance, Uniswap, SNX, Onye kere ihe na ndị ọzọ. Na mgbakwunye, Aave eweputakwala akara aka nke ọchịchị ya - AAVE. Nke a na-enyere ndị ji akara aka itinye aka na ochichi nke usoro Aave. Enwere ike itinye akara aka AAVE n'elu ikpo okwu iji nweta mmasị yana ụgwọ ọrụ ndị ọzọ.
Aave na-eje ozi dị ka ikpo okwu ịgbazinye ego s. Nwere ike ibiri ma binye ego dijitalụ na Aave n'ụzọ adịghị mma, na-enweghị itinye akwụkwọ AML ma ọ bụ KYC ọ bụla. Dị ka onye na-agbazinye ego, ị ga-etinye akụ gị nke ọma na ọdọ mmiri. A ga-ewepụta akụkụ nke ọdọ mmiri ahụ dị ka ihe nchekwa megide volatility n'ime usoro DeFi. Nke a na - emekwa ka ọ dịrị ndị ọrụ nfe iwepu ego ha n’emetụghị ego.
Ọzọkwa, ị ga-enwe ike ịnata mmasị na ego ị na-enye n’elu ikpo okwu. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịgbazite ego, Aave na - enyere gị aka ịgbaziri ego site na ịhazigharị akụ gị. LTV nke ego mgbazinye ego ị natara sitere na 50 ruo 75%.
Agbanyeghị, ewezuga nke a, Aave na-egosipụtakwa onwe ya site na ịnye ngwaahịa ndị ọzọ pụrụ iche - dịka mgbazinye ego mkpuchi na-enweghị nchekwa na ngbanwe ọnụego. Anyị ga-atụle nke a karịa n'ụzọ zuru ezu na 'Crypto Loans at DeFi Platform' ngalaba nke ntuziaka a. Ka o sina dị, sụdị uchiche puru iche ekwela ka Aave nweta ngagharị na mpaghara DeFi. N'ezie, e jiri ya tụnyere usoro mgbakwunye DeFi ndị ọzọ na oghere a, Aave na-enye ngwa ọgụ pụrụ iche nke atụmatụ.
Celsius bu uzo ozo ngọngọ nke mepụtara nke ya. Oghere CEL bụ ọkpụkpụ nke usoro ndụ Celsius. Enwere ike iji akara aka ERC-20 a n'ime usoro Celsius iji bulie elele gị site na ngwaahịa ya.
N'ihe banyere ịba uru, Celsius na-enye gị ohere ị nweta mmasị na akụ crypto gị, yana ọmụrụ nwa dị 17.78%. Nke a dị mma karịa ogo ụlọ ọrụ - agbanyeghị, ị ga - ejide akara CEL iji nweta nloghachi nke a. Celsius na-enyekwa gị ohere iji mkpuchi dị ka ihe nkwekọrịta iji gbazite ego ego ma ọ bụ akụ dijitalụ ndị ọzọ.
Ọzọkwa, ọnụego ọmụrụ nwa ebe a bụ asọmpi dị ịtụnanya - setịpụrụ naanị na 1% APR. Nke a bụ na ị na-ezuru CEL tokens zuru oke na ikpo okwu. N'okwu dị mfe, uru ị ritere n'elu ikpo okwu na-adabere na ego CEL ị jidere. Dị ka ndị dị otú a, ọ bụrụ na ị nwere mmasị iji Celsius, ọ ga-abụ ezi echiche ịgbakwunye CEL na pọtụfoliyo mkpuchi gị.
Ka emechara, ndị na-ejide na osisi CEL tokens nwere ike nweta nloghachi kachasị elu na nkwụnye ego ha, yana belata ọmụrụ nwa na mgbazinye ego. N'ihe banyere uru nke ego, akara aka CEL amụbawo site na 20% na uru kemgbe mmalite nke 2021. Agbanyeghị, ọ dị mkpa iburu n'uche na uru nke akara CEL dị oke na mpụga nke usoro Celsius.
Enwere ike ịtụle Egwuregwu Compound dị ka otu nnukwu usoro mgbazinye ego na ngalaba DeFi. Dị ka ọ dị na ọtụtụ nyiwe ndị ọzọ nke DeFi ndị a tụlere taa, a na-ewu usoro Compound na ngọngọ Ethereum. Agbanyeghi na ebuputara ya na mbido ya, ya na mwepụta nke usoro ochichi ya, Compound na-ewere usoro ole na ole mbụ ya iji wee bụrụ nzukọ na-achị obodo.
N'oge edere, Compound na-akwado mkpụrụ ego crypto 12 na anụ kwụsiri ike - nke gunyere ọtụtụ akara ngosi DeFi ndị ama ama. Facilitylọ ọrụ ịgbazinye ego na crypto na Compound na-arụ ọrụ dịka usoro ntanetị ndị ọzọ. Dị ka onye na-agbazinye ego, ị nwere ike irite nwere mmasị na ego gị site na ịtinye ego na ikpo okwu. Mgbe dị ka onye na-agbaziri ego - ị nwere ike ịnweta ohere mgbazinye ego ozugbo akwụ ụgwọ mmasị.
Agbanyeghị, adaeze niile na-akwado site na ngwaahịa ọhụrụ akpọrọ nkwekọrịta cToken. Ndị a bụ ihe nnọchi anya EIP-20 nke akụ dị n'okpuru - na-agbaso uru nke akụ ị debe ma ọ bụ wepụrụ. Azụmaahịa ọ bụla nke usoro Compound na-eme site na nkwekọrịta cToken. Nwere ike iji ha nweta ego, yana ịkwụ ụgwọ iji nweta mgbazinye ego. Can nwere ike 'mint' iji tinye aka gị na cTokens ma ọ bụ gbazite ha site na usoro Compound.
Compound na-ejikwa algorithm dị mgbagwoju anya nke na-akọwa ọnụọgụ mmasị na ikpo okwu. Dị ka nke a, n'adịghị ka nyiwe ndị ọzọ nke DeFi, ọnụego ọmụrụ nwa na-agbanwe - dabere na ọkọnọ na mkpa n'ime protocol. Site na ọchịchị ya token COMP - Compound na-eme atụmatụ iji nweta nchịkwa zuru oke. A ga-eme nke a site n'inye ikike ịtụ vootu na inye onyinye maka ndị na-ejide COMP na nyiwe ya na DeFi.
MakerDAO bụ otu n'ime ihe ntanetị mbụ nke DeFi iji jide anya nke ndị na-etinye ego na crypto. Emere oru ngo a na 2017 ma na-eje ozi dị ka sistemụ vault dijitalụ ejikọtara. Nwere ike itinye ọtụtụ cryptocurrencies nke sitere na Ethereum ma jiri ha mee ihe ngosi akara ngosi nke usoro ikpo okwu - DAI. Dịka anyị kwuburu na mbụ, uru DAI gosipụtara na dollar US. Enwere ike iji DAI nke ị na-emepụta na MakerDAO dị ka ihe nkwekọrịta iji wepụta ego.
Agbanyeghị, cheta na ịgbanwere akara ngosi ERC-20 gị na nkwụghachi maka DAI abụghị n'efu na ikpo okwu. A ga-akwụ gị ụgwọ onye na-akwụ ụgwọ mgbe ị na-emepe vault. Feegwọ a nwere ike ịkpachara anya site n'oge ruo n'oge ma ga-emelite ya na akpaghị aka n'elu ikpo okwu. Maka nke a, ọ bụrụ na ị na-eji Vaults ndị kere gị, ọ kachasị mma idobe ọnụọgụ nnabata gị dị ka o kwere mee - iji zere ịmịpụ mmiri mmiri.
Na mpụga usoro okike MakerDAO, DAI na-arụ ọrụ dị ka mkpụrụ ego DeFi ọ bụla. Nwere ike ibinye ya, ma ọ bụ jiri ya nweta ego na-enweghị ego. N'oge ndị na-adịbeghị anya, DAI emeela ka ọrụ ya dịkwuo gụnyere ịgụnye NFT, ntinye n'ime nyiwe egwuregwu, na azụmahịa eCommerce. Ewezuga DAI, MakerDAO nwere ego gọọmentị ọzọ - Onye kere. Dị ka ọ dị na mkpụrụ ego DeFi ndị ọzọ, ijide Onye kere gị ga-eme ka ị nweta ikike ịtụ vootu yana obere ụgwọ n’elu ikpo okwu.
Ihe nyiwe a tụlere n’elu na-ahụtụ anya na netwọọkụ DeFi a na-ewu taa. Ka ọ na-aga, ọdịnihu nke mpaghara DeFi ga-ekpebi obodo nke dị n’azụ ya. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu na-adọta uche ndị ọzọ, ọ ga-egosipụta na ọnụahịa nke mkpụrụ ego DeFi ahụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụwa nke DeFi agbanweela ngalaba ego. Ihe nrịba ama ndị a kachasị nke DeFi na-agbanwe ụlọ ọrụ ahụ site na iji teknụzụ Blockchain. N'aka nke ya, ị ga-enweta nghọta na ịchịkwa akụ gị nke ọma.
Ọ bụrụ na ị kwenyere na DeFi nwere nnukwu ikike ọ ga - achị n’ọdịnihu, otu ihe aga - eme ga - abụ itinye ego na mkpụrụ ego DeFi. Maka ndị ọhụrụ na oghere mkpuchi, ị ga-erite uru site na ntakịrị nduzi na mpaghara a. Ya mere, anyị ejirila otu ndu iji zụta mkpụrụ ego DeFi kacha mma na mpaghara dị n'okpuru.
Esi Zụta DeFi Coins
Ka ọ dị ugbu a, a na-atụ anya na ị nwere nkwenye siri ike nke ihe nyiwe DeFi bụ, na nke mkpụrụ ego DeFi na-achịkwa ahịa ugbu a. Iji hụ na mkpụrụ ego DeFi ahọpụtara gị nwere ike zụta n'ụzọ dị nchebe ma dịkwa ọnụ ahịa - n'okpuru anyị ga-agagharị gị site na usoro site na nkwụsị.
1kwụ na XNUMXkwụ XNUMX: Họrọ Regulated Online Broker
Nkọwapụta a gbasapụrụ agbasapụ na-enye gị ohere enweghị isi na ihe dijitalụ. Agbanyeghị, maka ndị chọrọ ịkpachara anya na itinye ego ha, anyị na-atụ aro ka ị leba anya na ya iwu nyiwe. Iji maa atụ, enwere ụzọ abụọ iji zụta mkpụrụ ego DeFi - otu site na mkpuchi mgbanwe, ma ọ bụ site na ịntanetị ore.
Y’oburu n’ichoputa ego mgbanwe nke etinyere n’uwa ma obu nkewa, I gaghi enwe nkasi obi igha izuta ego DeFi n’ego ozo. Kama nke ahụ, ị ​​ga-edozi ego mkpụrụ ego dịka USDT.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịhọrọ onye na-ere ahịa n'ịntanetị dịka Capital.com - ị ga-enwe ike ịzụ ahịa mkpụrụ ego Defi wee jiri ego US, euro, British pounds, na ndị ọzọ kwụọ ụgwọ akaụntụ gị.
N'ezie, ị nwere ike itinye ego na kaadị debit / kaadị n'otu ntabi na ọbụna e-obere akpa dị ka Paypal.
Maka ndị na-amaghị, Capital.com bụ nnukwu ụlọ ọrụ CFD na-ewu ewu nke FCA na UK na CySEC na Saịprọs na-achịkwa.
Ikpo okwu a na-akwado ogologo ahịa ahịa mkpụrụ ego DeFi - dị ka LINK, UNI, DAI, 0x, na obo ọzọ.
Ka o sina dị, ọ bụrụ na onye na-ere ahịa ị họọrọ n’ịntanetị anaghị enye ọrụ obere akpa arụpụtara, ị ga-achọkwa obere akpa dijitalụ na mpụga iji chekwaa DeFi Tokens gị. Nke a bụ, n'ezie, ọ bụrụ na ị naghị atụkwasị ha na nyiwe DeFi ọ bụla iji nweta ego na-abaghị uru.
2kwụ na Signkwụ XNUMX: Banye na Gị Họọrọ DeFi Trading Site
Mepe akaụntụ site na ikpo okwu nkpuru ego DeFi di mfe karia oge. Niile i nwere ime bụ dejupụta a ngwa ngwa ndebanye aha. Nke a gụnyere aha gị zuru ezu, ụbọchị ọmụmụ, adreesị ebe obibi, na nkọwa kọntaktị gị. Nke ahụ kwuru, ọ bụrụ na ị na-eji usoro nhazi dịka Capital.com - ị ga-enyocha njirimara gị dịka akụkụ nke usoro KYC.
Nwere ike mezue usoro a ozugbo site na itinye ihe ngosi nke njirimara - dị ka otu akwụkwọ paspọtụ gị ma ọ bụ ikike ịkwọ ụgbọala. Na Capital.com ị ga-enwe ụbọchị iri na ise iji mezue usoro a. Ọ bụrụ na ịmeghị nke a, a ga-akwụsịtụ akaụntụ gị na akpaghị aka. Ozugbo ebupụtara ma nyochaa akwụkwọ ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịgụta ọtụtụ ahịa DeFi - niile na-enweghị ọrụ ọrụ!
Nzọụkwụ 3: Nye Akaụntụ Gị n'ịntanetị
Tupu ịmalite ahia mkpụrụ ego DeFi na Capital.com, ị ga-akwụ ụgwọ akaụntụ gị.
Na Capital.com, ị nwere ike ime nke a site na iji kaadị akwụmụgwọ, kaadị debit, nnyefe ego ụlọ akụ, ma ọ bụ obere akpa elektrọnik dịka ApplePay, PayPal, na Trustly.
Nke kachasị, Capital.com anaghị akwụ ụgwọ ego nkwụnye ego ọ bụla ma ị nwere ike ịkwụ ụgwọ akaụntụ gị naanị $ / £ 20. Na nke ahụ kwuru, ọ bụrụ na ị na-etinye ego site na nnyefe ego n'ụlọ akụ, ị ga-agbakwunye opekempe nke $ / £ Ogbe 250.
4kwụ na XNUMXkwụ XNUMX: Chọta gị Họọrọ DeFi Mkpụrụ ego Market
Ozugbo ị melite akaụntụ gị, ị dịla njikere ịmalite ịzụ mkpụrụ ego DeFi. Na Capital.com - usoro a dị mfe. Naanị ihe ị ga - eme bụ ịchọ mkpụrụ ego DeFi ahọpụtara ahọrọ wee pịa nsonaazụ nke gbagoro.
Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịzụ ahịa Uniswap, ị nwere ike ịbanye‘ UNI ’n’ime ebe nchọta ihe.
Kwụpụ 5: Trade DeFi Coins
Ugbu a, ihe niile ị ga - eme bụ ịkọwapụta ọnụọgụ ego DeFi ịchọrọ ịzụ. N'aka nke ọzọ, ị nwekwara ike tinye ego ị chọrọ itinye n'ihe ize ndụ na mkpụrụ ego Defi a na-ekwu okwu ya.
Kedu ụzọ ọ bụla, ozugbo ị kwadoro iwu na Capital.com - a ga-egbu ya ozugbo. Nke kachasị mma - Capital.com agaghị akwụ gị otu pasent na ọrụ ma ọ bụ ụgwọ iji zụọ mkpụrụ ego Defi!
Ozugbo ịzụrụ mkpụrụ ego DeFi kacha mma maka ebumnuche ego gị, enwere ọtụtụ nhọrọ na tebụl. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ijide ha, gbanye ha, ma ọ bụ tinye ha n'ime usoro DeFi. Na mgbakwunye, dịka anyị tụlere n'ime ntuziaka a - ị nwekwara ike ịtọ mkpụrụ ego DeFi ma ọ bụ wepụ ego site na iji ha dị ka ihe inyeaka.
N’ụzọ dị oke mkpa, nyiwe ndị Defi enweelarị ike iwepụta oke obi ụtọ n’ahịa. Oghere dị iche iche dọtara nnukwu ego nke itinye ego na ọnwa 12 gara aga naanị - na-eto eto karịa afọ. Dịka ị pụrụ ịhụ nke ọma, enwere ọtụtụ nyiwe ndị jisiri ike weta uru ndị a kpọtụrụ aha nke DeFi na ọha mmadụ.
N’ime ọtụtụ okwu eji arụ ọrụ, enwere akụkụ abụọ ọkachasị nke nwegoro onwe ya n’etiti ndị na-etinye ego na ndị ahịa crypto. Ndị a bụ akaụntụ nchekwa ego crypto na mgbazinye ego nke usoro DeFi na-enye.
Dịka, na ngalaba ndị ọzọ nke ntuziaka a, anyị ga-eleba anya na ngwa ndị a, yana otu ị ga - esi jiri ha mee ihe iji bulie akụ gị crypto.
Akaụntụ Nzọpụta Crypto na nyiwe DeFi
Dịka anyị tụlere na mbụ, nyiwe kachasị mma nke DeFi nwere ọtụtụ ngwaahịa ego edoziri maka ndị na-anụ ọkụ n'obi crypto. N'ime ohere niile dị iche iche, echiche nke akaụntụ nchekwa ego crypto dị ka ọ na-enwetakarị nlebara anya. Ihe ndekọ ego crypto bụ ihe ọ dị ka ọ ga - abụ - ọ na - enye gị ohere ị nweta nloghachi na ntinye ego gị.
Agbanyeghị, e jiri ya tụnyere sistemu ego ọdịnala, usoro kachasị mma nke DeFi na-enye gị ọmụrụ nwa dị elu karịa na nkwụnye ego gị. Tupu ikpebie itinye ego na akaụntụ nchekwa ego crypto, ọ dị oke mkpa ịghọta etu ụlọ ọrụ ahụ si arụ ọrụ.
Kedu ihe ndekọ ego ego Crypto?
Ihe ndekọ ego ego Crypto bụ naanị ihe ọ na-ekwu na tin - akaụntụ nchekwa maka gị cryptocurrencies. Kama itinye ego fiat n'ime ụlọ akụ ọdịnala, ị ga-agbakwunye akụ gị crypto n'ime usoro ịgbazinye ego DeFi. N'aka nke ya, ị ga-enwe ike irite ọmụrụ nwa na nkwụnye ego gị.
N'ụzọ bụ isi, ihe ị na-eme bụ ibinye akụ gị n'aka ndị na-agbazinye ego nke otu ikpo okwu. Na nloghachi, ha na-akwụ ọmụrụ nwa maka ịgbazite akụ gị crypto. Dị ka ndị dị otú a, ihe ndekọ ego nchekwa ego na-enyere aka ịkwụ ụgwọ mgbazinye ego nke ọgbọ na ibe site na nyiwe kachasị mma nke Defi.
DeFi mgbazinye nyiwe
Dịka, na nyiwe mgbazinye ego - ị ga-agabiga usoro KYC siri ike iji nweta akaụntụ nchekwa. Ọzọkwa, ọnụego ọmụrụ nwa enyere enyere ga-ekpebi ụlọ ọrụ n'onwe ya. N'aka nke ọzọ, nyiwe DeFi na-arụ ọrụ dị ka usoro iwu - nke pụtara na ha nwere ike ịnweta onye ọ bụla na-enweghị ịgbaso usoro KYC ọ bụla.
Ọbụghị naanị nke ahụ, mana akụkọ anaghị akwụ ụgwọ, nke pụtara na ị gaghị enyefe ego gị n'elu ikpo okwu n'onwe ya. Ka o siri dị, ikpo okwu ịgbazinye ego na ebe nchekwa ego ha na-enye na-akpaghị aka. Nke a pụtara na usoro ochichi ga-ekpebi ọnụego ọmụrụ nwa.
N'ọtụtụ oge, usoro ịgbazinye ego kacha mma nke DeFi ga-agbanwe ọnụego ọmụrụ nwa dabere na ọkọnọ na ọchịchọ maka ihe bara uru na usoro iwu ahụ. Ọzọkwa, onye na-agbaziri ego nwere ike ịgbazinye ego site na ikpo okwu DeFi - na-agaghị agabiga usoro nkwenye ma ọ bụ nyocha kredit.
Anyị na-ekpuchi isiokwu nke mgbazinye ego crypto site na onye na-agbaziri ego na nkọwa zuru ezu na ngalaba na-esote nke ndu a. Ka o sina dị, n'ime afọ ole na ole gara aga, echiche banyere ịgbazinye ego DeFi amụbaala nke ukwuu. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ibute ọnụego ọmụrụ nwa dị elu karịa maka ndị na-agbaziri ego, ịdị mma nke enweghị nkwenye na-eme ka nyiwe DeFi mara mma - ọkachasị maka ndị e chere na ha nwere akara kredit ọjọọ.
Kedu ka ịgbazinye ego na-arụ ọrụ?
N'elu nyiwe kachasị mma nke DeFi, ị ga-ahụkwa okwu a bụ 'ịkọ ugbo' - nke na-ezo aka na ntinye akara ERC-20 iji nweta mmasị. N'ọtụtụ ọnọdụ, akaụntụ nchekwa ego crypto na ịkọ mkpụrụ anaghị adị iche. Site na nke ahụ, mgbe ị gafere usoro ikpo okwu DeFi, ị ga-eme dị ka onye na-eweta ego. Nke ahụ bụ ịsị, mgbe ị tinyere ego gị, a ga-atụkwasị ha na ọdọ mmiri mmiri mmiri.
Nloghachi maka inye ego a, ị ga-enweta ụgwọ ọrụ n'ihe gbasara mmasị.
Nhazi usoro ịgbazinye ego agbadoro agbachitere na usoro usoro nke akpaghị aka.
Dịka ọmụmaatụ, usoro kachasị mma nke DeFi dịka Compound na Aave echepụtala akwụkwọ nke aka ha - nke dị maka onye ọ bụla ịnweta.
A na-eme azụmahịa niile dị na nyiwe DeFi ndị dị otú a site na smart contracts (ọdọ mmiri).
Nke a na-eme ka o doo anya na a na-edozi usoro ịgbazinye ego na ịgbazinye ego n'ụzọ ziri ezi. Nkwekorita amamịghe ga-eme azụmahịa ahụ naanị ma ọ bụrụ na ezubere ọnọdụ ndị akọwapụtara site na ikpo okwu. Ka o siri dị, mgbe ị na-emepe ego nchekwa DeFi, ị na-eziga isi obodo ahụ na nkwekọrịta nkwekọrịta.
Na nloghachi, ị ga-enweta nloghachi n'ụdị akara dijitalụ ma ọ bụ nkekọ na-egosi na ị bụ onye nwe akụ ahụ. N'elu nyiwe kachasị na DeFi, a na-enyocha ndị nkwekọrịta amamịghe nke ọma ma dị maka ọha na eze. Agbanyeghị, dịka ị nwere ike iche n'echiche - ị nwere ike ịchọ ntakịrị ihe ọmụma nzuzo iji nyochaa data ahụ.
Taa, ọ bụghị naanị na ị nwere ike imeghe akaụntụ nchekwa ego crypto, mana ị nwekwara ike irite mmasị na ọtụtụ akara ERC-20 na anụ ụlọ anụ.
Yabụ, ịkwesịrị imepe akaụntụ nchekwa crypto na ikpo okwu DeFi? Ọfọn, dịka ị nwere ike iche n'echiche, uru dị mkpa nke ịmepe ego nchekwa crypto bụ ịnweta mmasị. Kama ịchekwa dijitalụ akụ gị na obere akpa gị, ị ga-enwe ike ịnweta karịa crypto karịa ihe ị gbazinyere. N'ụzọ dị oke mkpa, ị gaghị ebuli mkpịsị aka - dịka a ga-akwụghachi gị nkwụghachi na ndabere gị.
Agbanyeghị, ụbọchị ndị a, ọtụtụ ndị na-etinye ego na-ahọrọ ibinye ego na-akwụ ụgwọ dịka DAI. Nke a ga - enyere gị aka itolite isi obodo gị na enweghị ihe ọghọm metụtara vootu na cryptocurrencies. Ọzọkwa, ọtụtụ nyiwe DeFi na-enye gị ohere itinye akara nke ọchịchị ha.
Iji nyere gị aka ịghọta otu esi echekwa ego crypto na-arụ ọrụ, anyị emeela ihe atụ n'okpuru nke na-ekpuchi akụkụ niile dị mkpa.
Ka anyị were ya na ị na-achọ imeghe akaụntụ nchekwa ego maka akụ Ethereum gị.
Gafere na ntọala DeFi ị họọrọ ka ịtọlite ​​akaụntụ nchekwa ego gị.
Jikọọ Defi nyiwe gị obere akpa gị cryptocurrency.
Họrọ Ethereum na ndepụta nke mkpụrụ ego akwadoro ịgbazinye.
Ikpo okwu a ga-egosi gị mmasi ole ị ga - enweta n’elu osisi gị.
Họrọ ole Ethereum ị chọrọ ịkụ.
Mgbe ị dị njikere - kwado ego ahụ.
Cheta na n'ọtụtụ nyiwe, azụmahịa ndị dị otú ahụ ga-efu gị ụgwọ gas. Dị ka ndị dị otú a, gbaa mbọ hụ na ị ga-enyocha ọnụego metụtara tupu ịtọlite ​​akaụntụ nchekwa ego gị. Ugbu a, dị ka anyị metụrụ na mbụ - mgbe ị na-etinye ego cryptocurrencies, ị na-eme dị ka onye na-agbazinye ego crypto.
Ọtụtụ n'ime nyiwe DeFi ndị a na - enyekwa ego mgbazinye - na - enye ndị ọzọ ohere ibinye akụ gị. Na ọnọdụ a, ị ga - eji akụ dijitalụ gị dị ka onye inyeaka, kama ịdebe ha na akaụntụ nchekwa.
Na ngalaba dị n'okpuru, anyị na-akọwa otu ị ga-esi rite uru na mgbazinye ego crypto na nyiwe kachasị mma nke DeFi.
Mgbazinye ego Crypto na nyiwe DeFi
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-anụ ọkụ n'obi crypto, ị nwere ike ịmaraworị echiche nke atụmatụ 'ịzụta ma jide'. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, mgbe ị 'HODLing' akụ gị dijitalụ, ị na-echekwa ha na akpa nchekwa - ruo mgbe ị dị njikere ịkwụ ụgwọ. Agbanyeghị, ka ọ na-aga, ị na-ahapụrụ mkpụrụ ego gị nọ ọdụ na obere akpa.
Mgbazinye ego Crypto na nyiwe ịgbazinye ego na-enye azịza ọzọ na nke a - ebe ị nwere ike ịkọkọta akụ gị crypto iji nweta ego na nloghachi. N’okwu doro anya, mgbazinye ego crypto na-arụ ọrụ dị ka ntụgharị nke akaụntụ nchekwa. Kama ịbụ onye na-agbazinye ego ma na-enweta mmasị na akụ gị, ị ga-eji cryptocurrencies gị dị ka onye inyeaka iji nweta ego.
Kedu ihe mgbazinye ego Crypto?
Maka ụdị ego ọ bụla, ịnweta ego bụ otu n'ime isi ihe. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ kachasị mma inwe ike iji ego gị mepụta ego gị. Agbanyeghị, n'adịghị ka nchekwa ọdịnala, ahịa cryptocurrency dịtụ iche.
Ka anyị were ya na ị nwere 10 BTC, mana ị na-achọ ụfọdụ ego.
N'inye ahịa dị ugbu a, ị chọghị ire ere gị n'ihi na ị na-atụ anya na ọnụahịa nke BTC ga-abawanye nke ukwuu na ogologo oge.
Dị ka ndị dị otú a, ịchọghị ibupụ gị crypto, n'ihi na mgbe ịzụrụ ya na a gasịrị ụbọchị - ị nwere ike ejedebe na-erughị Bitcoin.
Nke a bụ ebe nyiwe ịgbazinye ego na-abanye. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ịnwere ike iji Bitcoin gị dị ka ihe nnochianya, iji nweta ego mgbazinye ego nke akwụ ụgwọ na ego crypto ma ọ bụ fiat. Agbanyeghị, na-atụle mgbanwe ọnọdụ nke mkpụrụ ego cryptocurrency, ị ga-emejupụta BTC karịa uru nke mbinye ego ị na-anata.
Typically, ụdị mgbazinye ego dị otú ahụ chọkwara ka ị kwụọ ụgwọ oke. Nke a ga - adị iche na otu usoro DeFi na ọzọ. Iji maa atụ, na Nexo, ịnwere ike ị nweta ego mgbazinye ego site na naanị 5.9% APR. Ebe na BlockFi, inwere ike nweta onodu ego di ala dika 4.5%.
Ozugbo ịkwụghachi ego mgbazinye ya na ọmụrụ nwa, a ga-eweghachiri gị akụ crypto. Ihe nkwụnye ego gị ga-anọ n'ihe ize ndụ ma ọ bụrụ na ị kwụghachi ịkwụghachi ego mgbazinye, ma ọ bụ uru nke nkwekọrịta gị. N'okwu a, ị ga-agbakwunye agbakwunye karịa.
Otu uru dị mkpa nke mgbazinye ego crypto bụ na ịnọghị na nkwenye ma ọ bụ nyocha ego. N'okwu dị mfe, ma e jiri ya tụnyere ụlọ akụ ọdịnala - ịgbazinye ego crypto dị ọtụtụ karịa. Dị ka ndị dị otú a, ịkwesighi ịdabere na ndenye ego dabere na akụkọ otuto gị ma ọ bụ ego gị. Platformslọ ọrụ kachasị mma nke DeFi na-enye gị ohere ikpebi usoro nke mgbazinye ego, na-enye gị mgbanwe dị ukwuu.
DeFi Crypto Loans Na-enweghị Nchịkọta
Ọ bụ ezie na imirikiti nhazi nyiwe nke etiti chọrọ ka itinye ego, ị nwekwara ike ịchọta nyiwe DeFi nke na-enye gị mgbazinye ego na-enweghị itinye ego. ọ bụla akpan owo. A na-akpọkarị ndị a ego mgbazinye ego enweghị nchekwa, nke na-enye obere oge mmiri mmiri.
Iji maa atụ, otu n’ime ezigbo nyiwe DeFi - Aave, na - enye gị ohere inweta mgbazinye ego Flash - maka ya, a gaghị agwa gị ka ị nye ọ bụla nkwa inye Kama, ị ga-enwe ike ịgbaziri akụ ma ọ bụrụhaala na ị kwụghachi ego mbinye ego n'ime otu azụmahịa.
Agbanyeghị, ego mbinye ego mkpuchi dị ka nchekwa echekwara maka ndị mmepe. Nke a bụ n'ihi na ịkwesịrị iwu nkwekọrịta mara mma iji rịọ mgbazinye ego, ma kwụghachi ya n'ime otu azụmahịa ahụ. Dị ka ndị dị otú a, ọ bụrụ na ị na-achọ iji ohere mgbazinye ego nke enweghị mkpuchi ọ bụlaọzọ, jide n'aka na ị nwere obi ike banyere otu usoro ahụ si arụ ọrụ.
DeFi Crypto mgbazinye ego nyiwe
Dịka o nwere ike ịbụ na ị maara, a na-eme ka nyiwe kachasị mma nke DeFi, ebe ndị ntụgharị na-akpaghị aka, kama ịbụ ndị mmadụ na-edozi. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-enye ọrụ DeFi dịka Aave na Compound na-eji nkwekọrịta amamịghe nke na-eji algọridim na-aga na usoro iwu ya iji mepụta nkwụnye ego akpaaka.
Ọzọkwa, usoro ndu ndị a bụ nke nghọta kpamkpam, ebe a na-ewu ha na ngọngọ. N'adịghị ka nyiwe ndị etiti, enweghị usoro nchịkwa - ọ bụ ya mere ị ga-eji nweta ego mgbazinye ego na-enweghị iji mezue usoro nkwenye. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịnweta mgbazinye ego crypto na ego fiat, ego DeFi, ma ọ bụ anụ ndị nwere ego dịka USDT.
Olee otu DeFi Crypto Loans Work
Iji kpochapụ alụlụ ahụ, anyị emeela ihe atụ nke otu esi etinye ego crypto na usoro bara uru.
Ka e were ya na ị chọrọ iji ego BTC were ego ego gị dị ka ihe nnochianya.
Want chọrọ mgbazinye ego na UNI.
Nke a pụtara na ị ga-achọ itinye ego ugbu a nke otu UNI na BTC.
Dika onu ahia ahia ugbu a, otu UNI bu ihe ruru 0.00071284 BTC.
Onye ahia gi choputara na-ebo gi ego nke 5%.
Mgbe ọnwa abụọ gasịrị, ị dịla njikere ịkwụghachi ego mbinye ego ma gbapụta Bitcoin gị.
Nke a pụtara na ị ga-etinye ego mgbazinye ego na UNI tinyere 5% nwere ọmụrụ nwa.
Ozugbo ị kwụghachiri ego ahụ, ị ​​ga-enweta nkwụnye ego Bitcoin gị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, na ihe atụ a - ị natara mgbazinye ego gị na UNI na-enweghị ire Bitcoin gị. N'akụkụ nke ọzọ nke azụmahịa ahụ, onye na-agbazinye ego crypto natara UNI mbụ ha, yana ụgwọ ọmụrụ nwa nke 5%. Nke ahụ kwuru, ọ dị mkpa iburu n'uche mgbanwe nke ahịa cryptocurrency n'onwe ya.
Dị ka ndị dị otú a, ị nwere ike ịmekọrịta ihe. Dịka ọmụmaatụ, na MakeDAO - a ga-achọ ka ị tinye ego nkwụnye ego ruru opekata mpe nke 150% nke uru nke mgbazinye ego gị. Ya mere, ka anyị kwuo na ị chọrọ gbaziri $ 100 uru nke UNI. Na MakerDAO - ị ga - etinye ego BTC $ 150 dị ka ihe nkwekọrịta iji nweta ego ahụ.
Ọ bụrụ na uru nke ego BTC gbadara n'okpuru $ 150, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ntanye mmiri mmiri. Ka o sina dị, mgbazinye ego crypto nwere ike ịbụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè iji rite uru na oghere DeFi. Ọ bụghị naanị na ị ga-enye gị ohere ịnweta ego mana zọpụta gị na nsogbu ị gafere site na ọrụ ego ọdịnala.
Ego kacha mma DeFi - Nweta ala
N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ nke DeFi na-agbanwe mgbe niile. N'ime obere oge, nyiwe DeFi jisiri ike itolite ịbụ akụkụ nke nnwale nke usoro akụ na ụba na nnukwu okike na taa. Agbanyeghị na ọ nwere ike ịpụta dịka ngalaba niche ugbu a, enwere ike na ngwa ngwa DeFi ga-anabata ngwa ngwa site na ahịa sara mbara.
Ozugbo ihe ịtụnanya bịara bụrụ isi, akụkụ dị iche iche nke DeFi ga-abanye n'ime ndụ kwa ụbọchị na ego. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, DeFi nwere ikike ịgbanwe ụwa ego dịka anyị si mara ya.
Agbanyeghị, ọ dị mkpa iburu n'uche na ahịa ego na-agbanwe agbanwe ka dị ọhụrụ. Dịka ọ bụla na-etinye ego ndị ọzọ, a ka nwere ihe egwu dị ebe a. Dịka otua, ị ga ahụta ihe bara uru iji ịdị uchu na-arụ ọrụ gị ma nweta nghọta banyere etu usoro ego eto eto a si agbanwe.
Gịnị bụ DeFi?
DeFi na-anọchite anya ego enweghị ego - nke bụ okwu enyere ndị ọrụ ego na enweghị ikike etiti. Iji nye gị echiche ka mma, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke nyiwe ego taa na-achịkwa otu ụlọ ọrụ. N'iji ya tụnyere, a na-eji usoro ọchịchị DeFi arụ ọrụ nke usoro iwu gọọmentị wuru na ngọngọ ma na-eji akụ na-ezighi ezi dịka cryptocurrencies.
Kedu ihe eji DeFi?
DeFi bu ulo oru na-eto ngwa ngwa. Taa, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ nyiwe DeFi na-enye ọrụ akpaaka. Nke a gụnyere mgbanwe, ịgbazinye ego, ịgbaziri ego, mkpuchi, mkpuchi ngwa ahịa, yana ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-anaghị achịkwa ya.
Kedu ihe bụ akara ngosi
Ọtụtụ nyiwe DeFi ewepụtala akara aka DeFi nke ha nke ga-enyere aka n'ịchịkwa usoro nkwekọrịta ya. Ndị jidere akara ngosi ala ndị a nwere ike ịnweta ikike ịtụ vootu na usoro okike DeFi.
Kedu mkpụrụ ego DeFi kacha mma?
Kacha mma DeFi tokens nọ na-ewu ewu na-ewu ewu kemgbe mmalite nke 2021. N'oge a na-ede akwụkwọ - ụfọdụ n'ime ihe ngosi kachasị mma nke DeFi n'ihe banyere isi ahịa ahịa gụnyere UNI, LINK, DAI, ZRX, MKR, COMP, na CAKE.
Kedu otu esi ahọrọ ego kacha mma DeFi iji tinye ego na ya?
Dị ka akụnụba ọ bụla a na-adọkpụ ga-adị, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe agaghị ekwe omume ịkọ nke mkpụrụ ego DeFi ga-enwetara gị nkwụghachi dị elu. Agbanyeghị, ịnwere ike ịmatakwu banyere ahịa DeFi site na ịmụ banyere ogbugba ndu DeFi dị iche iche yana ihe eji eme ha.
Ourzụta Token Anyị Ugbu a "DeFi Coin" Via Our Soft Launch!
Zụta DeFi Mkpụrụ ego Ugbu aZụta DeFi Mkpụrụ ego Ugbu a Purzụta Token kachasị ọhụrụ ugbu a!
DeFiCoins.io bụ mgbalị iji nye gị ihe ọmụma na-enye ihe ọmụma ị nwere ike ime ma nweta ego site na itinye ego na ọrụ kwesịrị ekwesị.
A na - arara ego ego DeFi iji debe ndị na - agụ ya oge niile site na usoro kachasị ọhụrụ n’ahịa DeFi. Ndi oru nta akuko anyi na ndi oru nyocha me nyocha nke oma ma nye gi ezigbo aka.
Dika ngalaba ulo oru DeFi enweta nnukwu aru, akara nile na aru oru na gburugburu DeFi kwesiri iru na elu. Nke a bụ ebe anyị batara, anyị na-ahapụ ndị na - agụ akwụkwọ anyị ka ha jiri ohere a mee ezigbo uru.
Bitcoin BTC Kọkọrọ Ego Ude kaadị Ego ego ụgwọ Agbasawanye na teknụzụ Defi DEX Ethereum Ego efu IRS Pizza Ugochukwu Strelka UNI Wepu Onwa.Finance Ọnụ ego YFI YFI Fall
Nkwarụ ike Copyright © 2021.